ကလေးများနှင့် နှလုံးအပေါက်ပါခြင်း (ဖွံ့ဖြိုးကျန်းမာကလေးများကမ္ဘာ၊ အပိုင်း-3) | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေးများနှင့် နှလုံးအပေါက်ပါခြင်း (ဖွံ့ဖြိုးကျန်းမာကလေးများကမ္ဘာ၊ အပိုင်း-3)
- မွေးရာပါနှလုံးမှာအပေါက်ပါတာတွေက ဖြစ်တတ်သလား?
- အလွယ်တကူ စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်လို့ ရသလား?
- အသက်နည်းနည်းရလာရင် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားနိုင်သလား?
- နှလုံးအပေါက်ပါတိုင်း ခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုရဲ့လား?
Dr Myanmar ကျန်းမာရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ " ဖွံ့ဖြိုးကျန်းမာကလေးများကမ္ဘာ" အစီအစဉ်ကတဆင့် ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းလာတဲ့ မေးခွန်းလေးကို ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဌာနမှူးဒေါက်တာဦးရဲမြင့်ကျော် က အခုလို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးထားပါတယ်။
ကလေးတွေမှာ အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုကုသမလဲ? မဖြစ်အောင်ကော ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?
၂၄.၆.၂၀၁၈ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
အဖျား၊ အန်​တာ၊ ​ချွေးထွက်​တာ၊ ဝမ်း​လျောတာ စတာ​တွေ​ကြောင့်​ အရည်​ဓာတ်​ဆုံးရှူံးမှုများ...
အချိုရည်ကြိုက်တဲ့ ရင်သွေးလေးတွေအတွက် မေမေဖေဖေတို့ မှတ်သားစရာ
၂၂.၆.၂၀၁၈ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးတွေကို အချိုစကျွေးမိတာနဲ့ သူတို့ဟာသကြားရဲ့အရသာကို စွဲလမ်းသွားတတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စက်ရုံထုတ်အချိုရည်တွေရဲ့ သကြားဓာတ်ကို နှစ်ခြိုက်နေတတ်ပြီး မကြာခဏပူဆာတတ်ကြပါတယ်။
ရယ်ဒီမိတ်အချိုရည်တွေတင် ကလေးတွေကြိုက်နှစ်သက်နေသလားဆိုတော့ သဘာဝအသီးဖျော်ရည်တွေကိုလည်း သူတို့ကသဘော...